Oko uYesu wabhala esantini? | Apg29
Uya kufumana impendulo umdla!
vesi yeBhayibhile apho wabhala uYesu emhlabeni (oko phantsi, hayi isanti), sifumana ibali, kwanomkrexezikazi umnwe kunye ukuxulutywa yi abaFarisi nababhali.
UYohane 8: 6-8. Oku bathi, bemlinga, kwaye babe nento yokummangalela. Kodwa uYesu, ethobe phantsi, wabhala ngomnwe emhlabeni. 7 Xa ke wema bembuza, waphakama waza wathi: ". Lowo ngaphandle kwesono, ukuze amgibisele ngelitye lokuqala" 8 Wandula ke wathoba phantsi, wabhala emhlabeni.
I wacelwa kanye oko kwabhalwa uYesu esantini. Uya kufumana impendulo umdla.
Makhe sifunde liphela kumxholo ukuba siqonde ngcono.
UYohane 8: 2-11
Bavuka kusasa ke wabuyela kwindawo etempileni. Bonke abantu bahlanganisana ngeenxa zonke kuye, waza wahlala phantsi, wabafundisa. 3 Ngoko ke ababhali nabaFarisi bazisa ke kuye umfazi obanjwe ekrexeza. Bambeka wakhe phambi kwabo 4 bathi: "Mfundisi, lo mfazi wabanjwa ekrexeza, kanye kuloo ntlondi, xa wakrexeza. 5 EMthethweni uMoses umthetho ukuba siluxulube. Ntoni wena?" 6 Le nto ke bathi, bemlinga, kwaye babe nento yokummangalela. Kodwa uYesu, ethobe phantsi, wabhala ngomnwe emhlabeni. 7 Xa ke wema bembuza, waphakama waza wathi: ". Lowo ngaphandle kwesono, ukuze amgibisele ngelitye lokuqala" 8 Wandula ke wathoba phantsi, wabhala emhlabeni.9 Bathe ke bona bakukuva oko, wemka, enye kwenye, abadala kuqala, yena wasala yedwa umfazi emi apho. 10 UYesu waphakama, wathi kuye: "Mfazindini, baphi na abo bamangaleli bakho? Akukho ukugwebileyo na?" 11 Yena wathi: "Hayi, Mhlekazi, akukho." UYesu wathi: "Nam andikugwebi. Yiya sono!"
UYesu wabonisa ngamazwi nangezenzo
Kweli candelo edumileyo iBhayibhile, sidla ukuba obala kuphela oko uYesu uthi Ongenasono amgibisele ngelitye kuqala, uze emva koko wemka usindwa amazwi kaYesu ngokuba bengasekho engenasono.
Kodwa uYesu isenzo yokubhala izihlandlo ezibini emhlabeni ngomnwe wakhe ezinxulumene oko akuthethayo.
Oku wakwenza abaFarisi nababhali. Bathi babecinga ukuba uYesu umboniso.
Bathe ke bona bakukuva oko uYesu wathi wabona umboniso wakhe, ukuze azi kwakuthetha kakuhle oko. Bazibona ngaphakathi zeBhayibhile ngaphandle yaye esazi ukuba yintoni na.
"Abo baphambukayo kum ifana ukubhala esantini"
Ngo uYeremiya kwiTestamente eNdala kubhaliwe kwathiwa:
Yehova, themba likaSirayeli. Nabani na dela uya kuza engeyakonto. Abo baphambukayo kum ifana ukubhala esantini. Baye babemshiyile uYehova, thende lamanzi aphilileyo.
UYesu wabonisa ngalo isenzo abaFarisi nababhali wawuwe kude, esishiyiweyo uThixo.
Xa uYesu ke wathi abo ngaphandle isono amgibisele ngelitye yokuqala, babengakwazi ukwenza nantoni na ngaphandle ukukhulula amatye uhambe kude ngenxa yokuba uYesu wabonisa ngokubhala phezu komhlaba ukuba siwile kude kuThixo futhi ofana incwadi esantini.
Kwenzeka ntoni incwadi ebhalwe esantini? I usaba kwamanzi kunye nomoya.
Comment yi Yeremiya 17:13
UNdikhoyo ke themba likaSirayeli
Kanye njengokuba uYehova, themba likaSirayeli, yena ithemba lakho. Ngaba wafumana uYesu, ukuba ikamva nethemba. Ukuba awuyifumenanga uYesu uza kuyenza phambi kokuba kakhulu emva kwexesha.
Nabani na azishiye yena lotshitsha
Ukubambelela kuYesu, yonke imihla yokudla kwakho ubomi. Uya kwandula ke ngenye imini kuba isiphelo basindiswe xa ufika ekhaya ezulwini. Kodwa amlahle, niya kudana. Kwaye akukho namnye ofuna ukuba neentloni?
Abo baphambukayo kum ifana ukubhala esantini.
Le icocekile kunye nenkcazelo ongenakoyiswa apho uYesu wabonisa ukuba abaFarisi nababhali. Baqonda nangoko oko wabhala uYesu esantini xa mabaxulutywe kwanomkrexezikazi, kuba wayesazi kakuhle oko kubhalwe Yeremiya 17:13. Kukho iziphumo elikhulu ngokushiya eNkosini. I incwadi ebhalwe esantini iya kutshayelwa ngumoya namanzi.
Baye wamlahla uNdikhoyo
Kutheni ifuze obhalelwe esantini? Kungenxa enokuba bamshiyayo uYehova.
Lo mthombo wamanzi aphilayo
UYesu wamanzi obomi, ngesisa. Mamkeleni ke su ukuze ufumane ubomi obungunaphakade. Umshiya engafundisi njengabo abaFarisi nababhali benza. Babemshiyile mthombo wamanzi ephilayo ngohlobo Yeremiya 17:13, waza akukho ubomi obungunaphakade.
V 04, torsdag 28 januari 2021 kl 03:17